आज बिहान ९ बजेर १७ मिनेटबाट शुक्रले मच्चाउँदै छ हङ्गामा, ४ राशिलाई राज योग ! – Krazy NepaL
May 20, 2021 1650
शुक्र ग्रह सौर्य मण्डलमा सूर्यबाट दोस्रो ग्रह हो। यस ग्रहको सतह चट्टानले बनेको छ र यसको वायुमण्डल कार्बन्डाईअक्साइड् र बिषालू सल्फ्युरिक् एसिडले बनेको हुन्छ। पृथ्वीको सामान्य तापक्रममा सल्फ्युरिक् एसिड तरल अवस्थामा हुन्छ तर शुक्र ग्रह यती तातो छ की शुक्र ग्रहमा भएको सल्फ्युरिक एसिड वाष्पीकरण भएर ग्यासको रूपमा पाइन्छ।
हरित गृह प्रभावका कारण यो ग्रह सौर्य परिवारको सबै भन्दा तातो ग्रह बनेको छ जसका कारण पृथ्वीमा बस्ने कुनै पनि सजीव वस्तु त्यहाँ जीवित रहने कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। यसको वायुमण्डलमा रहेको बाक्लो बादलका कारण यस ग्रहको सतह राडारको सहायताले मात्र पहिल्याउन सकिन्छ। शुक्र ग्रह आकारमा पृथ्वीभन्दा अलिकति मात्र सानो छ ।
पृथ्वीको व्यास १२ हजार आठ सय किलोमिटर छ भने शुक्रको व्यास १२ हजार १०२ किलोमिटर छ । शुक्र ग्रह सूर्यबाट १० करोड ८२ लाख आठ हजार नौ सय किलोमिटरको दूरीमा रहन्छ । यसले सूर्यलाई एक पटक घुम्न आठ महिना अथवा २२४ दिन १६ घण्टा लगाउँछ । सूर्यबाट नजिकाएको हुनाले यसको सूर्यपट्टि फर्केको सतह निकै तातो हुन्छ । यो ग्रहको सतहमा चार सय डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम हुने कुरा वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन् ।
यस ग्रहलाई अङ्ग्रेजीमा वेनस (Venus) भनिन्छ जुन रोमन माया र सुन्दरताकीदेवी वेनसकाे नामबाट राखिएको हो।
शुक्र ग्रह पृथ्वीको आकाशबाट प्रायजसो सधैं देखिन्छ तर बिहान सबेरै र सूर्यास्तको केही क्षण पछि राम्रो सँग देखिन्छ। यो ग्रह पृथ्वीबाट आकाशमा देखिने वस्तु मध्ये सूर्य र चन्द्रमा पछिको सबै भन्दा चम्किलो वस्तु हो। यसलाई कहिले काहीँ पर्ता तारा र the “Evening Star” पनि भनिन्छ किन भनेँ यो ग्रह प्रायजसो यी नै समयमा देखा पर्छ र जबसम्म बाइनाकुलर् वा दूरदर्शकयन्त्रको प्रयोग गरिँदैन तब सम्म यो ग्रह तारा जस्तै देखिन्छ।
बैशाख ५ गतेबाट शुक्र उदय भइसकेको छ । अब बैशाख २० गतेबाट शुक्रले मालभ्य राजयोग बनाउँदैछ । यो समयमा नसोचेको घटना हुन्छ । मागेका कुराहरु सबै पुरा हुन्छन् ।
१० राशिलाई अत्यन्तै शुभ छ जस्लाई हामीले चर्चा गरिसकेका छौं तर त्यो मध्ये पनि ४ राशिलाई राजयोग प्राप्त हुदैछ ।
यो राजयोग जेठ १३ गतेसम्मलाई रहने छ । शुक्र २० गतेको बिहान ९ बजेबाट मेष राशिबाट आफ्नो राशि वृषमा जादैछ ।बाँकी कुरा भिडियोमा हेर्नुहोस
Prevयी हुन् मृ’गौ’ला फेल हुन लागेका प्रारम्भिक संकेत, यी उपायबाट बचाउन सक्नुहुनेछ
Nextमृत्युअघि मानिसलाई यमराजले देखाउने ४ संकेत !
जाडोमा ज्वरो आउने , घाँटी दुख्ने, सिंगान बग्ने समस्याको घरायसी औषधि हेर्नुहोस् (जानकारिको लागि सक्दो सेयर गरौं )